बाबुरामले किन सेना हटाऔं भने
‘नेपाली सेना हटाऔं’ डा.बाबुरामजस्ता बुद्धिजीवीले यसो भनेपछि धेरैले किन भनेछन् भनेर चासो राख्नु स्वभाविक हो । नेपालको विकास र समृद्धिको मार्गचित्र नामक प्रस्तुतीमा डाक्टरको यस्तो बिद्वता सार्वजनिक भएको हो ।
हुन त प्रधानमन्त्री भएका बेलामा चीनबाट फर्कदा आधा नेपाल उत्तरतिर र आधा दक्षिणतिर मर्ज सवमर्ज हुनसक्छ भनेर बोल्ने व्यक्ति अर्काको घातक हतियारभन्दा बढी बन्न सक्छ र ?
पाइला टेक्ने धर्तीका लागि प्यालेस्टाइनले जीवनलाई मृत्युमा होमेर पनि आर्जन गरिछाडे । नेपाल त वीरहरुको देश, यस्तो देशमा यस्ता कायरहरु बस्छन्, जो बुद्धिजीवीको लेबल निधारमा टा“सेर सेना चाहिदैन भन्छन् । सबैलाई थाहा छ, नेपाली सेना नेपाली जनताको नमक खाएर काम गरिरहेको छ । नेपाली सेना नेपालको अन्तिम सुरक्षाकवच हो । राजनीति बाइफाले भएकाले, राजनीतिमा एकजना पनि राजनेता नभएकाले सेनाको जरुरत हिजोभन्दा आज झन बढी छ तर डाक्टर बाबुराम किन हो, सेना चाहिदैन भन्छन्, नितान्त निन्दनीय छ ।
डा.बाबुरामको यो अनौठो प्रस्ताव, अनौठो विचार हो । देशको प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिले देशको सुरक्षा कसरी हुन्छ भनेर थाहा पाएकै हुनुपर्छ । कतै त्यो सुरक्षाघेरा फा“ड्न र विदेशीलाई घुस्ने ढोका खाल्न त यसो भनेको होइन?
सेवाकालीन उपसचिव जो स्थायी शासनका अंग हुन्, तिनलाई तालिम दिन तैयार पारिउको विकास र समृद्धिको मार्गचित्रमा सेना चाहिदैन भन्ने पाठ्यक्रम । यो त झन आश्चर्यजनक कुरा हो । यद्यपि उनले वालिक सबैलाई अनिवार्य सैन्य तालिम दिनुपर्छ पनि भनेका छन् । सेना चाहिदैन भने नागरिक सेनाको कुरा किन फेरि ? नेपाल उत्तर कोरिया हो र ? सबै नागरिक सेना बन्न ?
बाबुरामले चीन र भारतस“ग गैरसन्धि गर्नुपर्ने तथा दुबैतर्फका खुल्ला सीमानाहरु व्यवस्थित गर्नुपर्ने पनि बताएका छन् । त्यस बाहेक नेपाललाई संयुक्त राष्ट्र संघको रोहवरमा शान्ति क्षेत्र घोषणाको माग पनि अघि सारेका छन् । डा.बाबुराम भट्टराई किन सेनाको विरोध गरिरहेका छन् । सेनाले जति काम राजनीतिक शुद्धतासहित प्रशासनले गरिदिएको भए सुशासन र समृद्धि उहिले आइसक्थ्यो ।